निगमलाई १५ दिनमा १५ करोड नाफा ? — Motivate News
निगमलाई १५ दिनमा १५ करोड नाफा ?
Posted on March 19, 2018 by Ghanshyam Shrestha
काठमाडौं – नेपाल आयल निगमले १५ दिनको अवधिमा १५ करोड रुपैयाँ नाफा आर्जन गरेको छ ।
इन्धन विक्रीबाट निगमले नाफा कमाएको हो ।
निमगले नाफा आर्जन गरेपछि पछिल्लो समय अन्र्राष्ट्रिय बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको मुल्य केही बृद्धि भए पनि स्थानीय बजारमा बृद्धि गरेको छैन ।
ईन्डियन आयल कर्पोरेसन आईओसी ले १६ मार्चमा पठाएो नयाँ मुल्य सामान्य बढेर आए पनि स्थानीइ बजारमा भने निमगले साविककै मुल्य कामय गरेको हो ।, आजको करोवारमा यो खबर छ ।
साउन १, भक्तपुर – भक्तपुर नगरपालिकाले आर्थिक वर्ष २०७५÷७६ का लागि तेस्रो नगरसभाबाट पारित एक अर्ब ७३ करोड ४० लाखको बजेट सार्वजनिक गरेको छ । नगर प्रमुख सुनिल प्रजापतिले बजेट सार्वजनिक गर्दै आयतर्फ बाह्य स्रोत ९८ करोड ८६ लाख ८३ हजार तथा...
नबिल बैंकले एकै पटक १२ वटा शाखा सञ्चालनमा
काठमाडौं – नबिल बैंकले एकै पटक १२ वटा शाखा सञ्चालनमा ल्याएको छ । नबिल बैंकले मंगलबार कर्णाली प्रदेश तथा प्रदेश ७ र प्रदेश ५ का विभिन्न गाउँपालिकाहरुमा १२ वटा शाखा आजैबाट कारोबार सुरु हुनेगरी सञ्चालनमा ल्याएको हो । मंगलबार अर्थमन्त्री डा. युवराज...